स्वास्थ्य जीवनको तीन कडीः आहार, विहार र विचार | Healthplus Nepal
2019 Oct Sat 03:53:41
Aug Thu 2019 05:26:21
हामी निरोगी जीवन बाँच्न चाहन्छौं । सधै तन्दुरुस्त र जवान रहन चाहन्छौं । कुनैपनि रोग, कष्ट आदिबाट टाढा रहन चाहन्छौं । अस्पताल धाउनुपर्ने, औषधी खानुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने यावत् प्रक्रियाबाट मुक्त रहन चाहन्छौं । हामी चाहन्छौं, जीवनभर अस्पताल जान नपरोस् । औषधी सेवन गर्न नपरोस् । प्राकृतिक रुपमै निरोगी र तन्दुरुस्त जीवन विताउन पाइयोस् ।
अतः कसरी पाउने यस किसिमको जीवन ?
अहिले हामी स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भएका छौं । कस्तो खानपान गर्दा शरीर निरोगी हुन्छ भनेर खोजी गर्न थालेका छौं । आफ्नो छाकमा पोषिलो एवं सन्तुलित खानपान मिलाउने प्रयास गर्न थालेका छौं । यसैगरी व्यायाम, योग आदि गर्न थालेका छौं । यसरी हामी रोगमुक्त जीवन बाँच्ने प्रयासमा छौं । यद्यपि बेलाबखत हामी रोगको चपेटामा पर्ने गर्छौं । आखिर के कुरामा तालमेल मिलिरहेको छैन ?
खानपान र दिनचर्या मात्र अनुशासित भएर पुग्दैन । शरीर शुद्धिकरण गरेर मात्र पुग्दैन । मन पनि शुद्ध हुनुपर्छ । मन प्रफुल्ल, शान्त र सकारात्मक हुनुपर्छ । यसका लागि खराब विचार त्याग्नुपर्छ । दम्भ, इष्र्य, लोभ, कामवासना, अहंकार जस्ता विकार त्याग्नुपर्छ । जब हामी यी विकार हटाउँछौं, मनमा करुणा, प्रेम, श्रद्धा, कृतज्ञता पलाउँछ ।
सकारात्मक सोंच र चिन्तनले हामीलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ्य बनाउँछ । मन र शरीरवीच आपसमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले शरीरसँगै मनलाई शुद्धिकरण गरेर हामी निरोगी जीवन पाउन सक्छौं ।